आज चैत महिना काे पहिलाे दिन अचम्मित पार्ने किसिमले यस्तो भयो सुनको भाउ ! – Namaste Host
March 14, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on आज चैत महिना काे पहिलाे दिन अचम्मित पार्ने किसिमले यस्तो भयो सुनको भाउ !
आइतबार सुनको मूल्य ४ सयले बढेर प्रतितोला ८६ हजार ६ सयमा पुगेको छ। शुक्रबार सुन तोलमा ८६ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो।आज चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको सुनचाँदी व्यसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार प्रतितोला १२ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोही मूल्यमा कायम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १७ सय २८ डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
काठमाडौंमा एक छाक खाना खानुपर्‍यो भने कति पैसा खर्च हुन्छ? त्यसमा मासु भात नै खानुपर्‍यो भने त दुई दिनको सादा खानले एक छाकलाई पनि पुग्दैन।सामान्यतया सादा खाना खानुपर्‍यो भने कम्तिमा एक सय रूपैयाँ गोजीमा हुनैपर्छ। यो तपाई हामीले खाएको, बुझेको र सुनेको कुरा हो। तर, अब ५० रूपैयाँ गोजीमा भयो भने पनि पेटभरी खाना खान पाइनेछ। त्यसमा १० रूपैयाँ थपेर ६० रूपैयाँ पुर्‍याउनुभयो भने त मासु भात नै खान पाइन्छ।वसन्तपुर दरबार क्षेत्रबाट परोपकार भिमसेनस्थान नजिकै रहेको ‘खाना सबैलाई’ सामुदायिक भान्छाले यसरी खाना खुवाउँदै आएको छ। यहाँ खाना खानको
लागि दैनिक तीन सय भन्दा बढी ग्राहकहरू आउँछन्। जो सस्तोमा गुणस्तरीय र स्वादिष्ट खाना खाएर जान्छन्। जोगेन्द्र शाह दुई महिनादेखि त्यही सामुदायिक भान्छामा नियमित खाना खान्छन्।त्यहाँको सरसफाई, खानाको गुणस्तर र स्वादिष्टताले उनलाई यो होटल कुनै विदेशीले चलाएको जस्तो लागेको थियो। उनले प्रश्न गरे, “ए बाबु! यो होटल कुन देशको नागरिकले सञ्चालन गरेको हो?” उनले यस्तो प्रश्न गरिरहँदा सामुदायिक भान्छाका सञ्चालक कृष्णहरि भट्टराई त्यहिनेर थिए। उनले आफूलाई देखाउँदै भने, “यो त हामीले नै सञ्चालन गरेका हौं
कोरोना संक्रमणबाट काभ्रेका ‘ड,न’ निमा लामाको नि,ध’न
May 12, 2021 May 12, 2021 Bijay Lama